Game of Sultans (Myanmar) - Codashop
ထုတ်ကုန်များ ⇒ Power Ranking Rush.
Game of Sultansဂိမ်းကိုTop-upလိုက်ပါ။ Sultansဂိမ်းစိန်များကို MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel,(သို့) Wave Money နှင့် easyPoints အသုံးပြုပြီး ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Creditsကတ်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း(သို့) Loginဝင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ သင်ငွေချေမှုအောင်မြင်ပြီးပြီးခြင်း စိန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အခုပဲGame of SultansကိုDownloadလိုက်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသော ပက်ကိတ်ချ်များတခုနှင့်တခုမတူညီပါသဖြင့် မိမိဝယ်လိုသည့်ပက်ကိတ်ချ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှသာ ဝယ်ယူပါ
Monthlyကတ်Upgrade မဝယ်မှီ မိမိMonthlyကတ်ဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ
1 ID ထည့္သြင္းပါ
သင်၏IDရှာရန် ဘယ်ဘက်ထောင့်ရှိမိမိProfileပုံကိုနိပ်ပြီး player infoသို့ဝင်ပါ။သင့်IDအား Profileပုံအောက်တွင်ပြထားပါသည်။ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင်IDပြည့်စုံစွာဖြည့်ပါ။
L 50 Diamonds
L 250 Diamonds
L 500 Diamonds
L 1000 Diamonds
L 2500 Diamonds
L 5000 Diamonds
L Monthly Card
L Monthly Card Upgrade
L Yearly Card
Creditကတ်မလိုဘဲGame of Sultansအတွက်Top upလိုက်ပါ။
Game of Sultans ဆိုတာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ဥရောပအင်ပါယာတစ်ခုလုံးကို အုပ်ချူပ်ရတဲ့ Sultanဘုရင်တပါးရဲ့ အတွေ့အကြုံမျိူး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကစားရမယ့် RPG ဂိမ်းတခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားတိုင်းဟာ ဇာတ်ကောင်ကို စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲများ၊ တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်၊ စိတ်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ၊ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ၊ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေနဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံကို ဖြေရှင်းရမှာပါ။
ကစားနည်း သော့ချက် :
• Sultanဘုရင်ဖြစ်လာခြင်း - အင်ပါယာကို ကိုယ်တိုင်စီမံမှု အတွေ့အကြုံ
• ဘုရင်မရွေးချယ်ခြင်း - လှပပြီး စိုးမိုးနိုင်လွန်းသော မိဖုရားများနှင့်တွေ့ဆုံမှု!
• ဗိုလ်ချုပ်များခန့်အပ်ခြင်း - အလွန်ခက်ထန်သော သမိုင်း၀င်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကောင်စီ ဖွဲ့စီးခြင်း
• မိသားစု၀င်ဖန်တီးခြင်း - ချစ်စရာကောင်းသော သင့်ကလေးငယ်များကို ပြုစုပျိူးထောင်ခြင်း
• PvP သို့၀င်ရောက်ခြင်း - မိမိစစ်တပ်ကို အခြားကစားသမားများနှင့် အပြိုင်မြှင့်တင်ခြင်း!
• မဟာမိတ်ထူထောင်ခြင်း - မိတ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် ရန်ဖက်နိုင်ငံများ ပြုလုပ်ပြီး တိုက်ပွဲများတွင် ပါ၀င်ခြင်း
• တူရကီကော်ဖီဆိုင် - ခွက်ဗေဒင်ဆရာမနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်း ခွက်တခုစီရှိ သင့်အနာဂတ်ကို နားထောင်ခြင်း!
The Ottoman အင်ပါယာရဲ့ ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲချိန်၊ အမှတ်ရစရာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအောင်မြင်မှုများ၊ ဖန်တီးအုပ်ချုပ်မှု၊ စစ်ပွဲများ၊ ပုန်ကန်မှုများ၊ အချစ်၊ အိမ်ထောင်မှုနှင့် ကော်ဖီကောင်းများရဲ့ အချိန်ကာလတခု။
သင့်မေးခွန်းများ၊ feedback နှင့် အကြံပေးချက်များအတွက် အောက်ပါ Customer Support Team သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
စည်းမျဉ်းဥပဒေများ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု မူဝါဒ